अमेरिकाले त्यहाँ बसिरहेका १५ हजार नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न सक्ने ! – Dcnepal
अमेरिकाले त्यहाँ बसिरहेका १५ हजार नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न सक्ने !
प्रकाशित : २०७७ भदौ ३० गते १२:४३
काठमाडौं। अमेरिकाबाट करिब ४ लाख आप्रवासी निकाल्न डोनाल्ड ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ । अब ट्रम्प सरकारले नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुरासका ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ (टिपिएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछ । यी ६ देशका टिपिएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीको संख्या करिब ४ लाख भएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यी सबैलाई अमेरिकाबाट निकाल्न ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।